Ideski Legumbi lokulala lika-Q Elihle Kakhulu Igumbi lokugezela elihlanganyelwayo ku-3 Bdrm Home - I-Airbnb
Ideski Legumbi lokulala lika-Q Elihle Kakhulu Igumbi lokugezela elihlanganyelwayo ku-3 Bdrm Home
Reno, Nevada, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Kathryn
Leli gumbi lokulala elihle linombhede othokomele osayizi wendlovukazi one-impressa foam topper isihlalo sokuphumula kanye nedeski elinesihlalo nalo.
Indlu yokugezela iyahlanganyelwa futhi sihlala siyigcina ihlanzekile. I-WIFI, ne-Roku TV ene-Netflix U-Hulu no-Philo usekamelweni futhi usekamelweni lomndeni elinosofa wokulala negumbi lokuhlala elinendawo yomlilo yegesi.
Ikhishi eligcwele, igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala, izingadi kanye nevulandi kuvulekele ukusetshenziswa. Uphahla oluphezulu nokubukwa okuhle okuvela kuwo wonke amagumbi.
Amaphakheji okumasaji nempilo ayatholakala
Amagumbi akho angasese ayindlovukazi asekupheleni kwehholo anedeski elinesihlalo kanye nesitulo esengeziwe i-Roku ekude ukuze isetshenziswe kalula. Kungaba khona yokungena yangasese Thru egalaji uma kudingeka noma efunwa. SIngabantu abanomusa abaqaphelayo abajabulela indawo yomphakathi futhi ngokuvamile abangekho eduze kwakho ngakho uzozizwa ukhululekile ukusebenzisa futhi ujabulele leli khaya elinokuthula.
4.79 · 87 okushiwo abanye
Ukubuka nganoma yisiphi isikhathi sosuku kungiphuca umoya- thanda kanjalo nawe! I-Hills ye-moon lite walks, indawo enhle yokuzijabulisa futhi elula kakhulu kuthelawayeka futhi ethule kakhulu.
Ngokuvamile ngitholakala ngokuthumela umbhalo kanye ne-imeyili, nefoni
Hlola ezinye izinketho ezise- Reno namaphethelo